Ịkwanyere, PVC plastic osisi oghere oghere mmepụta akara
Ịkwanyere, eyi, Pee osisi plastic profaịlụ mmepụta akara
Ala SPC nwere formaldehyde efu, ihe na-egbochi mildew, ihe mgbochi mmiri, mgbochi ọkụ, mgbochi frog na njirimara ndị ọzọ, nrụnye dị mfe.
Atụmatụ SPC Floor
Site na nkwụsi ike na ịdịte aka dị mma, ala plastik nkume na -edozi nsogbu nke iru mmiri, deformation na mildew nke osisi siri ike, ma nwee ike idozi nsogbu formaldehyde nke ihe ịchọ mma ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ nhọrọ nke imebe ụkpụrụ na agba, ọ dịkwa mma maka ịchọ mma n'ime ụlọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọgwụ, nnukwu ụlọ ahịa na ebe ọha ndị ọzọ nke pavement ala.
Tụnyere ala plastik osisi, ala SPC nwere njirimara nke teknụzụ nrụpụta dị mfe yana ọnụ ala.
Ala SPC na -eji ntụ ntụ gburugburu ebe obibi na PVC dị ka akụrụngwa, na usoro mmepụta na -enweghị gluu, yabụ enweghị formaldehyde, benzene ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na -emerụ ahụ. Ihe mejupụtara ya bụ oyi akwa na-eguzogide, akwa oyi akwa UV, akwa ihe nkiri agba agba na akwa mkpụrụ. Ihe mejupụtara ntọala ya bụ ntụ ntụ nkume na ihe polymer thermoplastic, nke a na -akpachapụ anya wee tụba ya n'ime efere mejupụtara na oke okpomọkụ iji hụ ike na ike nke ala.
Ala SPC nwere akwa ihe nkiri agba agba pụrụ iche, enwere ike ịpị ya n'ime udidi mkpụrụ osisi dị adị n'elu ala site na igwe eji ebipụta ihe atụ. Igwe ihe nkiri agba agba agba agbakwunyere yana udidi nke elu ala mere ka ala SPC ma ọ bụrụ na iitatedomi ya na osisi, okwute ma ọ bụ kapeeti ga-enwe ike nwee ọdịdị na udidi.
Ihe mgbochi mmiri na mgbochi skid bụ uru ọzọ dị na ala SPC. Igwe arụmọrụ mmiri nke SPC bụ nke dabara na oyi akwa nke ihe mkpuchi mmiri na -agbasa na ala, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike igbochi mmiri ala, kamakwa ọ nwere ike igbochi ma chịkwaa mmiri dị n'elu nsị, nwere ike gbochie ịmụba nje.
Mkpụrụ ala calcium nke ala SPC dị ka okwute ịnweta, nwere ezigbo njikwa ọkụ na nkwụsi ike ọkụ. Yabụ na ọ dabara adaba maka ojiji na gburugburu ala na -enweghị nrụrụ na enweghị mwepụta gas na -emerụ ahụ. SPC n'ala rebound oyi akwa na-eyi na-eguzogide oyi akwa Ọdịdị, nwere ike n'ụzọ dị irè okpomọkụ ichebe, ọzọ ume ịzọpụta.
Akụkụ nke SPC Floor Extrusion Production Unit
Mmepụta ala SPC na -aga n'ihu na -abụ ụlọ ọrụ anyị dabere na ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe na imepụta efere plastik plastik na nyocha nnwere onwe na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ, ma tinye akwụkwọ maka patent dị mkpa.
Emebere ngwaahịa a maka ala rọba plastik.
Ọ nwere njirimara nke ịchekwa ike, arụmọrụ dị elu na nkwụsi ike.
Ejiri igwe kwụ ọtọ anọ kwụ ọtọ, ngwa ngwa ma dịkwa mma iji dochie rolle ụkpụrụ, ọrụ na mmezi dị mfe, ihe nchekwa dị elu;
Ihe nkiri agba, na -eyi akwa na -eguzogide ọgwụ nwere ike dochie ya n'otu oge docking, enweghị ihe efu;
Mepụta usoro pụrụ iche iji hụ na mbelata ngwaahịa na nkwụsi ike;
Ejikwa ya na: usoro nsuso ụkpụrụ, iji hụ na mmepụta nke ụkpụrụ ala n'otu omimi.
Companylọ ọrụ anyị na -enye injinịa ntụgharị, dị ka njirimara nke ala SPC maka ndị ahịa ịzụlite atụmatụ kachasị dị irè na ezi uche.
Nke gara aga: Sjsz Series Conical Twin Screws Extruder
Osote: Stabilizer nke Dabere na Otu Pack
Taịlị Mgbidi Diagonal
Ọgwụgwụ Of Line taịl
Ahịrị Groim Skim Coat
Onye Wpc Extruder, Nweta Wpc, Na -akụpịa igwe ihe, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Line Wepụ profaịlụ Wpc,